Yan Aung: မယူလိုက်က မိုက်လို့ထင်... ယူလိုက်ပြန်က ကြိုက်လို့ထင်..
မန့်ရမလား မမန့်ရဘူးလား မစဉ်းစားတော့ပါဘူး ရေးသွားပြီ ကိုရေခဲငှက်ရေ .... စကားမစပ် မ ကဘယ်သူလည်းဗျ....
ဟတ်ဟတ်.. ရယ် ပြီးမန့်သွားတယ် ကိုရန်အောင်ရေ.
၀တာရှိဝ စူဂိုးခု ပျင်းနေတယ်ဒက်စ်. ကိုရန်အောင်ရဲ့ပို့စ်
လာဖတ်မှပဲ ရယ်ရတော့တယ်။ ဘာပြောပြော..ပြောချင်တာသာပြော မန့်သွားပြီနော်.. :D
ဒီလို ရီစရာလေးတွေကြောင့် ကိုရန်ကြီးရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒတွေ တစ်လုံးတစ်ခဲ ပြည့်ဝပါစေသော်... ကိုရန်ရေ... အတည်တော့ မပေါက်နဲ့နော်။ နံတယ် နံတယ်... ဂယ်ပဲ... :P
ထိတ်လန့်တကြားပြေးလာတာ ဒါရိုက်တာရန်ရယ် ..
ကျွန်တော်လည်း အဲလိုတော့ တွေးမိသားဗျ
ကြိုက်လွန်းတော့လည်း ကွန်မန့်ဖို့က လက်ခက်
ီစီဘောက်စ် မှာပဲ ဟက်ဟက် (ဒါရိုက်တာရန်ရဲ့ လက်သုံးရယ်သံ ပြန်သုံးတယ် :D) လုပ်ခဲ့ရတယ်ဗျာ ။
အဲဒီကဗျာကို တော်တော်ကြိုက်ခဲ့တာပါ။ (ကွန်မန့်လဲ ပေးရင်ကောင်းမလား။ မပေးရင်လည်းမိုက်တယ် ထင်ဦးမယ်):P
အသစ်တွေ စောင့်ရတာ ကြာပါပကာ
ကိုရန်အောင် ကျွန်တော်တစ်ခုမေးချင်လို့။ ကျွန်တော့် ဘလော့ဂ် ကိုဖွင့်ရင် alert message တစ်ခုပေါ်လာတယ် 'ဟေ့ဟေ့. သတိထားနော်. ခင်ဗျား အခုသွားနေတာ ကိုရန်အောင်ရဲ့ ဘလော့ဂ်ဗျ. ဟတ်ဟတ်ဟတ်.'
အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဗျ။ ကျွန်တော်လည်း ဘလော့ဂ်ဘက်မလှည်ဖြစ်တာ အတော်ကြာသွားတယ် အဲဒါကြောင့် ဘယ်သူဝင်ကလိသွားလဲမသိဘူး ကူညီပါဦးဗျာ။ ဘယ်နေရာကနေသွားဖျက်ရမလဲ ဟဲဟဲ။
ကိုကို ကာလသားက ပျိုပျို ဘလော့ဂ်ဂါများကို ရိသဲ့သဲ့လုပ်တယ်လို့အပြောခံရဦးတော့မှာ....။
ကိုရန်အောင်ရဲ့ အရွှန်းဖောက်ရေးတတ်တဲ့ ပညာလေးကို ခေါက်သိမ်းမသွားပါစေနဲ့ ... မ.. ရေ...။
“မ၀ယ်ဘူး မယ်ခူးတဲ့ဖက်စို” ပဲကြားဖူးတာ
တွေ့လားနာမည်တောင် ခခွေး ပါအောင်ပေးထားတာသာကြည့်တော့
ဒါရိုက်တာ ရန်ကြီးလွမ်းနေတယ်လို့ နော်
မန့်မှာပဲ မန့်မှာပဲ..း)
ဆေးလိပ်သောက်ထားတဲ့ ပါးစပ်ကြီးနဲ့တော့ မ ကို သွားမနနမ်းနဲ့နော်.. မောင်းထုတ်နေမှ ပြေးပေါက်မှားမယ်.. အဟေး ဟေး (ကရင်ညိမ်း ဆီမှ အတုခိုးသည်)
အဟဲ.. ဆေးလိပ်ကြိုက်ဘူး ကိုရန်အောင်က... :)
ဗျို့ ကိုရန်လေး ...
ဆေးတံတို တညိုလောက် မဟုတ်ဘူးလား။
တို နဲ့ ညို လွဲနေသလိုပဲမို့ ... ။
ကြည့်ရတာ ကိုရန်လေးရဲ့ "မ" နာမည်က "ညို" ပါသလားမသိဘူး။ တညိုညိုနဲ့ :D
ရေခဲညှပ် ကဗျာလေး မိုက်တယ်။
မော်ဒရိတ်တော့ ပြင်နိုင်ဘူးနော် ...
"ဂွတ်နိုက်နော် မ" က ဘာမှလဲ ဆိုင်ဘူးနော်။
ဒါနဲ့ ... ရေရော ချိုးပြီးရဲ့လား။ :P
ဘာဖစ်လဲ ဘာဖစ်လဲ :P
အော် စကားမစပ် ရေခဲညှပ်ရဲ့ “မ” နဲ့လဲ မိတ်ဆက်ပေးသေးဘူး :)
ရယ်ရတယ်..ဗျို့။ စိတ်နှလုံးထဲထိ တကယ့်ကို ဟက်ဟက်ပက်ပက်ပါပဲ။ တစ်နေ့လုံး ပင်ပမ်းခဲ့သမျှ စိတ်ထဲက အစိုင်အခဲတွေ ပုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲ။ ကျေးဇူးစင်္ကြာဝဠာပါနော်..။ :)